चीन सिलिकॉन रबर पाना निर्माता र आपूर्तिकर्ता - Zhonggao
ZhongGao को बारेमा
लेपित ओ रिंग
Encapsulated हे रिंग
रबर सील कर्ड
OEM रबर भाग
कस्टम OEM रबर भाग
OEM रबर भाग अनुकूलन मामला
घर > उत्पादनहरु > रबर कर्ड > रबर पाना
Viton हे रिंग
Cladding सामग्री हे रिंग
सिलिकन रबर पाना
सिलिकॉन रबर पाना मुख्य लाभ: पहिलो, उत्कृष्ट विरोधी रासायनिक चरित्र। यो लगभग सबै माध्यमहरुमा लागू हुन्छ दोस्रो, तापमान दायरा धेरै फराकिलो छ। (लगभग -30 ° C to200 ° C) तेस्रो, विरोधी compressibility प्रकार्य धेरै राम्रो छ। चार, तेल प्रमाण, क्षार प्रतिरोध, राम्रो लोचदार र लामो जीवनकाल।
सिलिकॉन रबर पाना विवरण:
1. Ningbo Zhonggao SealHad आफ्नै ढाँचा विभाग 20000 आकार ढाँचा, भित्री व्यास 0.05mm बाट 1.2m, C/S 0.5mm देखि 20m को लागी एक समय आकार को लागी एक मोल्डिंग हुन सक्छ, सबैभन्दा ठूलो ID 6m, C/S मा बनाउन सक्छ। 30m भन्दा माथि
2. NBR मटेरिया -40 120 देखि 120 ° सम्म उच्च र कम तापमान सामना
3. लागू उद्योग: रासायनिक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, चिकित्सा प्रविधि, खाद्य उद्योग, ढल निकास उद्योग, इस्पात उद्योग, र यति मा।
4. लागू उपकरण: मेकानिकल सील, दबाव पोत, ग्यास कम्प्रेसर, प्रतिक्रिया पोत, हीट एक्सचेंजर, बायलर, फिल्टर र यति मा।
पहिलो, उत्कृष्ट विरोधी रासायनिक चरित्र। यो लगभग सबै माध्यमहरुमा लागू हुन्छ।
दोस्रो, तापमान दायरा धेरै फराकिलो छ। (लगभग -30 ° C देखि २०० ° C)
तेस्रो, विरोधी compressibility प्रकार्य धेरै राम्रो छ।
चार, तेल प्रमाण, क्षार प्रतिरोध, राम्रो लोचदार र लामो आयु
6. अपरेशन सर्तहरु: दबाव: <= 50mpa
7. घर उपकरण बनाउन र मानक रबर रिंग को लागी टूलींग शुल्क को मुक्त मा, मोल्ड लाइन 45 ° र 180 be हुन सक्छ।
सिलिकन रबर पाना प्यारामीटर:
उत्पादन को नाम
NBR (-40 ~ 120 ° C), FFKM (-20 ~ 320 ° C)
Viton (-20 ~ 200 ° C), सिलिकॉन (-70 ~ 220 ° C)
EPDM (-50 ~ 150 ° C), पु (-40 ~ 90 ° C)
उच्च दबाव, तेल, मौसम, घर्षण, विलायक, उच्च तापमान, घर्षण प्रतिरोधी, उमेर प्रतिरोधी, इन्सुलेशन, एसिड र क्षारीय प्रतिरोधी को प्रतिरोध
टीएस १9 49 ४
20-90 किनार ए
रातो, कालो, सेतो, नीलो, हरियो, स्पष्ट, वा कस्टम
कुनै पनि आकार, अनुकूलित/मानक र गैर मानक
यदि instock, भुक्तानी पछि3दिन भित्र
7-15 दिन एक्सप्रेस द्वारा भुक्तानी पछि
10-20 दिन जहाज द्वारा
सानो मात्रा: यूपीएस/FeDex/डीएचएल एक्सप्रेस
ठूलो मात्रा: एयर/समुद्र द्वारा
OEM र ODM स्वागत छ
प्लास्टिक झोला र गत्ते का डिब्बा वा तपाइँको आवश्यकताहरु अनुसार
रासायनिक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, चिकित्सा प्रविधि, खाद्य उद्योग, ढल निकास उद्योग, इस्पात उद्योग, अर्ध-आचरण उद्योग र यति मा।
1. कुनै पनि जिज्ञासा २४ घण्टा भित्र जवाफ दिइनेछ
2. पेशेवर निर्माता, कुनैपनि समयमा हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न स्वागत छ
3. OEM सेवाहरु स्वागत छ
4. उच्च गुणस्तर, फेसन डिजाइन, उचित र प्रतिस्पर्धी मूल्य र छिटो नेतृत्व समय
5. बिक्री पछि सेवा
6. छिटो वितरण
7. तपाइँको बिक्री क्षेत्र, डिजाइन को विचार र तपाइँको सबै निजी जानकारी को संरक्षण
तपाइँ अर्डर को लागी तिर्न सक्नुहुन्छ: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल
8. नि: शुल्क नमूना तपाइँको जाँच को लागी suppy हुन सक्छ।
हामी बाट सील को अंगूठी किन्न स्वागत छ। हामी अग्रणी र पेशेवर चीन निर्माताहरु र यस क्षेत्र मा आपूर्तिकर्ताहरु मध्ये एक हो। र हाम्रो कारखाना स्टक मा थोक उत्पादनहरु तपाइँको छनौट मा छ। कृपया एक आदेश राख्न स्वतन्त्र हुनुहोस्। अनुकूलित आदेश पनि स्वीकार गरीन्छ।
सील प्राय स्पेयर पार्ट्स को रूप मा एक लामो समय को लागी भण्डारण गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। जस्तै: विकृत, अक्सिजन, ओजोन, प्रकाश, गर्मी, नमी, तेल वा विलायक को प्रभाव मा, O- अंगूठी परिवर्तन विफलता को आफ्नो भौतिक र रासायनिक गुणहरु को कारण हुन सक्छ। DIN7716, ISO2230, DIN9088 मानक रबर सील आकार, सफा र आधारभूत नियम बनाए। सामग्री को प्रकार अनुसार, यी मापदण्डहरु भण्डारण शर्तहरु र भण्डारण अवधि सिफारिश मानहरु को प्रावधानहरु दिइन्छ।
क्रम मा elastomer को भौतिक र रासायनिक गुणहरु को बनाए राखन को लागी, कृपया यी भण्डारण नियमहरु, यी सिद्धान्तहरु को क्रम मा सबैभन्दा उपयुक्त भण्डारण शर्तहरु मध्ये एक को बनाए राखन को लागी पालन गर्नुहोस्:
† † तापमान: ५ â 25 25 देखि २५ â the the आदर्श भण्डारण तापमान हो। गर्मी र घाम संग सम्पर्क बाट बच्नुहोस्। क्रायोजेनिक भण्डारण राज्य सील बाट हटाइयो, २० â „before वातावरण भन्दा पहिले केहि समय को लागी पहिलो स्थान।
idity † आर्द्रता: गोदाम को सापेक्ष आर्द्रता %०%भन्दा कम हुनु पर्छ, धेरै गीला वा धेरै सुक्खा बाट बच्न को लागी, घनीभूत छैन।
† † प्रकाश: घाम र यूवी संग बलियो कृत्रिम प्रकाश बाट बच्न। यूवी सुरक्षा झोला सबैभन्दा राम्रो सुरक्षा प्रदान गर्दछ। चित्रित रातो वा सुन्तला रंग वा स्टिक सनस्क्रीन फिल्म प्रस्तावित गोदाम को विन्डोज मा।
† † विकिरण: मुहरहरु लाई ionizing विकिरण क्षति बाट बच्न।
† † अक्सिजन र ओजोन: रबर सामाग्री हावा परिसंचरण प्रवाह को जोखिम बाट बच्नु पर्छ। प्याकेजि Through्ग को माध्यम बाट, लपेटन र एक airtight कन्टेनर मा भण्डारण वा अन्य उपयुक्त साधन त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न को लागी। ओजोन हानिकारक, धेरै elastomer भण्डारण कोठा निम्न उपकरण बाट बच्न: पारा वाष्प बत्ती, उच्च भोल्टेज बिजुली उपकरण, मोटर्स, स्पार्क वा स्थिर बिजुली उपकरण उत्पादन हुनेछ।
formation † विरूपण: elastomer सामाग्री एक मुक्त राज्य मा राखीनु पर्छ, स्ट्रेचिंग, सression्कुचन वा अन्य विरूपण बाट प्रभावित हुन बाट बच्न। यदि मूल प्याकेजि ela्ग elastomer गैर विकृत राज्य मा छ, तपाइँ मूल प्याकेजि use्ग को उपयोग गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
तरल वा अर्ध ठोस सामाग्री संग सम्पर्क: रबर सील विलायक, तेल, वा अन्य अर्ध ठोस सामाग्री (जब सम्म निर्माताहरु प्याकेजिंग मूल प्याकेजि so्ग) को लागी एक्सपोजर हुनु हुँदैन।
धातु वा nonmetallic सामाग्री संग सम्पर्क: चुम्बकीय सामाग्री, कच्चा फलाम, तामा र मिश्र धातु रबर हानिकारक हुन सक्छ कि सामाग्री संग सम्पर्क को अनुमति नदिनुहोस्। पीवीसी सामग्री सील प्याकेज गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिदैन। विभिन्न सामाग्री को छाप एक साथ मिश्रित हुनुहुन्न।
† † सफा: आवश्यकतानुसार, तपाइँ साबुन र पानी को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ सील सफा गर्न को लागी। पानी तर फाइबर प्रबलित सील, रबर धातु बन्धन छाप, AU भागहरु लाई सम्पर्क गर्न अनुमति छैन। कीटाणुनाशक, कार्बनिक विलायक, र उपकरण को तीखा किनाराहरु को उपयोग गर्न को लागी अनुमति छैन। सफाई पछि सील कोठा को तापमान मा सुक्नु पर्छ, एक गर्मी स्रोत को नजिक छैन।
प्राय: सोधिने प्रश्न:
1, तपाइँ निर्माण वा व्यापारिक कम्पनी हो?
हामी निर्माण, हाम्रो कम्पनी inBuilding १३, Jinshi Industrail पार्क, दक्षिणी Binhai औद्योगिक क्षेत्र, Ningbo, चीन मा छ।
2, के म तपाइँ बाट नमूनाहरु प्राप्त गर्न सक्छु?
अवश्य, तपाइँ सक्नुहुन्छ। नमूनाहरु तपाइँ स्टक मा छ भने, तपाइँ उनीहरुलाई सित्तैमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, मात्र एक्सप्रेस लागत को लागी तिर्न आवश्यक छ।
3, के तपाइँ OEM उत्पादनहरु उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, हामी तपाइँको चित्र वा नमूनाहरु द्वारा उत्पादनहरु उत्पादन गर्न सक्छौं।
4, तपाइँको MOQ के हो?
यदि हामी स्टक मा उत्पादनहरु छन्, मात्रा तपाइँको आवश्यकता द्वारा, यदि हामी उनीहरुलाई स्टक मा छैन: NBR, SIL, SBR, EPDM, NR: १०० US $; पु, HNBR, FKM: १५० अमेरिकी डलर
5, कुन ढुवानी तरीका तपाइँ उत्पादनहरु को लागी प्रयोग गर्नुहुनेछ?
हल्का तौल वा सानो को लागी, हामी टीएनटी, डीएचएल, यूपीएस, FEDEX आदि जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय एक्सप्रेस को उपयोग गर्दछौं, यो सधैं 3-5 दिन को आवश्यकता छ र तपाइँको क्षेत्र अनुसार पुग्न सकिन्छ, भारी वजन र ठूलो आकार को लागी, हामी सिफारिश गर्दछौं कि तपाइँ समुद्री बाटो वा हवाई ढुवानी द्वारा लिनुहोस्
6, तपाइँको भुक्तानी सर्तहरु र वितरण मिति के हो?
टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, आदि। हामी पनि अलीबाबा व्यापार आश्वासन को माध्यम बाट भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। वितरण मिति तपाइँको अर्डर मा निर्भर गर्दछ। वितरण मिति 7-25 दिन हो। यदि तपाइँ आपतकालीन उत्पादनहरु को जरूरत छ, हामी पहिलो व्यवस्था को उत्पादन को गति गर्न सक्छौं।
7, तपाइँको मानक प्याकिंग के हो?
सबै सामानहरु गत्ते का डिब्बा द्वारा प्याक र pallets संग लोड गरिनेछ। विशेष प्याकि method विधि स्वीकार गर्न सकिन्छ जब आवश्यक छ।
8, तपाइँसँग कस्तो प्रकारको प्रमाणपत्र छ?
हामी टीएस १9 49 ४,, W270, NSF, KTW, WRAS, पानी मार्क, LFGB, ROHS र पहुँच द्वारा अनुमोदित विभिन्न रबर यौगिकहरु छन्।
9, तपाइँ फरक रंग सामाग्री आपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, हामी कस्टम मोल्डेड रबर र सिलिकॉन रबर उत्पादनहरु विभिन्न रंगहरु मा उत्पादन गर्न सक्छौं, र code कोड एक आदेश को मामला मा आवश्यक हुनेछ।
१०, कस्ता सामग्रीहरु तपाइँको पक्ष बाट उत्पादन गर्न को लागी उपलब्ध छन्?
NBR, EPDM, SILICONE, FKM, NEOPRENE (CR), NR, IIR, SBR, ACM, AEM, Fluorosilicone (FVMQ), FFKM।
११, रबर सील को जीवन प्रत्याशा के हो?
उत्पादन जीवन वातावरण, चक्र, दबाव, आदि सहित धेरै कारकहरु मा आकस्मिक छ, Maihua रबर सञ्चालन को सबै फरक शर्तहरु को तहत सील जीवन को भविष्यवाणी गर्न सक्दैन। Accellerated जीवन परीक्षण ग्राहक द्वारा अपेक्षित जीवन निर्धारण गर्न को लागी प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, तर गतिशील आवेदन मा आयोजित गरिनु पर्छ।
हट ट्याग: सिलिकॉन रबर पाना, कारखाना, अनुकूलित, निर्माताहरु, चीन, सस्तो, आपूर्तिकर्ता
Neoprene रबर पाना
Epdm रबर पाना
Nitrile रबर पाना
रबर गैस्केट पाना
ठेगाना: भवन १३, Jinshi Industrail पार्क, दक्षिणी Binhai औद्योगिक क्षेत्र, Ningbo, चीन।
हाम्रो ओ रिंग, रबर सील, तेल सील, ect को बारे मा सोधपुछ को लागी। वा pricelist, कृपया हामीलाई तपाइँको ईमेल छोड्नुहोस् र हामी २४ घण्टा भित्र सम्पर्क मा हुनेछौं।
प्रतिलिपि अधिकार © २०२१ Ningbo Zhonggao रबर र प्लास्टिक निर्माण कं, लिमिटेड। सबै अधिकार सुरक्षित।